Etu esi eme kandụl: ndụmọdụ na usoro kacha mma | Mmeghari ohuru Green
Otu esi eme kandụl
Anyị maara na maka ịchọ mma, kandụl bụ nnukwu echiche. Karịsịa ma ọ bụrụ na ha na -esi ísì ụtọ. Ha nwere ọmarịcha ihe ịchọ mma ma dakọtara ngwakọta dị iche iche. Ị nwere ike ịtụgharị ebe ahụ ka ọ bụrụ ebe a nabatara nke ọma wee mepụta ụdị dabara gị mma. E nwere ụfọdụ ndị chọrọ ịmụta ihe esi mee kandụl n'ụzọ dị mfe ma dị irè.
Ya mere, anyị ga -arara akụkọ a ka ọ gwa gị nke ọma otu esi eme kandụl na ihe njiri mara ha.
1 Kandụl ndị na-esi isi
2 Otu esi eme kandụl n'ụlọ
3 Otu esi eme kandụl site na nzọ ụkwụ
Kandụl ndị na-esi isi
Kandụl ndị na -esi ísì ụtọ na -esi ísì ụtọ, nke bụ ọdịiche dị n'etiti oghere mara mma nke ọma na ụlọ na -ekpo ọkụ na nke enyi. Site na ha, anyị nwere ike ịtụgharị gburugburu ọ bụla ka ọ bụrụ ebe izu ike na anwansi, na -akpali oge na ebe ndị ọzọ. Maka nke a, kandụl na -esi ísì ụtọ abụrụla ihe ọzọ na ịchọ mma anyị ma bụrụ onyinye mara mma inye na ekeresimesi ma ọ bụ n'oge ọ bụla n'afọ.
Mana nke ahụ abụghị naanị: kandụl bụkwa akara nke mmeghari ohuru, mmụta na ịdị ọcha. Nke a bụ ihe mere eji eme ha ọtụtụ oge n'omenala dị iche iche gburugburu ụwa nke na -eji ha akwalite ntụgharị uche ma ọ bụ mepụta ọnọdụ na -atọ ụtọ na nke ihunanya. Na mgbakwunye, dabere na isi ha, ha nwekwara ike inwe mmetụta nke ịdị mkpa, mgbari nri, izu ike ma ọ bụ mkpali n'ime anyị, ma kwalite mmetụta ụfọdụ.
Akụkọ banyere kandụl malitere na mbido mmepeanya mbụ. Site na kandụl mmanụ ndị Rom ruo n'ichepụta ndị ọzọ mara mma nke a na -esi n'osisi, ahịhịa osisi, ma ọ bụ ndị Ijipt na -eji alaka ehi ma ọ bụ atụrụ atụrụ apịtị apịtị. Maka omenala ndị a niile, Ọ bụ ụzọ isi na -enye ọkụ ma na -ejikwa ya n'ememe okpukpe na ịchụ àjà.
Ịdị adị ya dị ka akara ekeresimesi nwekwara akụkọ ihe mere eme nke ọtụtụ narị afọ. A na -eji kandụl achụpụ mmụọ ọjọọ wee jiri nwayọọ nwayọọ bụrụ otu n'ime ihe ndị a na -ahụkarị na ezumike ndị a. N'ezie, enwere ihe akaebe na na narị afọ nke XNUMX ka etinye oriọna n'elu osisi ekeresimesi German iji chọọ ụlọ ahụ mma.
Malite na nchọpụta mmanụ na 1850, e ji paraffin mee kandụl ndị ahụKa e mesịrị, mgbe mmanụ ọkụ na ọkụ eletrik pụtara n'ụlọ anyị, ihe niile gbanwere. Nke a bụ ka kandụl na -esi enweta grail nsọ mara mma ma na -esi ísì ụtọ, ọ bụghị naanị ngwa ọrụ ọkụ.
Otu esi eme kandụl n'ụlọ
Ọ bụrụ na anwansi nke kandụl na -amasịkwa gị, mgbe ahụ ị maraworị na enwere puku kwuru puku ụdị, ụdị, nha na agba dị iche iche n'ahịa. Agbanyeghị, enwere ike ịme ha n'ụlọ, na ha bụ n'ezie nka dị mfe na nke mbụ zuru oke dị ka onyinye. Ka anyị hụ ihe ndị dị mkpa achọrọ iji mụta ka esi eme kandụl:
Ihe a nụchara anụcha ma ọ bụ wax paraffin (Ị nwere ike ịchọta ya na ụlọ ahịa nka ma ọ bụ n'ịntanetị.) Ọnụ ego ahụ dabere na kandụl ịchọrọ ịme na nha ya.
Agba, ụda nke nhọrọ gị.
Otu ihe ma ọ bụ karịa na -akpụzi kandụl gị.
Isi ihe na -esi ísì ụtọ. Ị nwere ike iji mmanụ ndị dị mkpa, mana gbaa mbọ hụ na ha kacha dị ala ma ọ bụghị na ị gaghị enweta ezigbo nsonaazụ.
A ite nke gbazee wax mkpanaka ntuziaka (a na -erekwa ha n'ịntanetị na ụlọ ahịa pụrụ iche), spatula osisi na oriọna (ego dabere na kandụl ịchọrọ ịme).
Otu esi eme kandụl site na nzọ ụkwụ
Ọ na -ewe oge ịmụta ka esi eme kandụl na -esi isi, mana ọ naghị agbagha agbagha. Dị nnọọ jide n'aka na -eso nzọụkwụ n'okpuru:
Ihe mbụ ị kwesịrị ime bụ iji kpoo wax na pan, n'elu ọkara ma ọ bụ obere okpomọkụ, ruo mgbe agbazere nke ọma. Ezi echiche bụ ime ya na mmiri ịsa ahụ (tinye akpa ya na wax n'ime ite buru ibu) wee jiri spatula kpalie.
Mgbe ahụ, mgbe waksị dajụrụ ntakịrị, tinye agba nri na ntakịrị ntakịrị ụtọ gị kacha amasị. Kpachara anya ka ị ghara imebiga ya ókè, ma ọ bụghị ya, ísì ụtọ ị na -enye ga -adị oke ike ma na -akpasu iwe.
Na -esote, ọ bụ oge ịkpụ ya: wụsa agbazere agbazere, na -esi ísì ụtọ na nke nwere agba n'ime ụdị ị họọrọ (nke mbụ, echefula itinye mmanụ na -esi nri mmanụ ala).
Mgbe ah jikọọ oriọna na kandụl wee kechie otu nsọtụ kandụl ahụ na mkpanaka nduzi. Ị ga -ahụ oghere na mkpanaka nke ị ga -esi banye na ogho oriọna ahụ ma nyefee ya na nsọtụ ọzọ nke ebu. Wick ụfọdụ na -abịa na ntọala dị larịị maka ịrapara na kandụl anyị, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ itinye ha n'ime akpa.
N'ikpeazụ, kpụa mkpụkpu, na -agba mbọ hụ na ịhapụ otu ibe ka ị nwee ike gbanye ya n'enweghị nsogbu.
Ugbu a bụ oge ikwe ka waksị ajụ oyi, usoro a nwere ike were ọtụtụ awa. Iji belata oge nchere, ekwesịrị idobe ha na ebe dị jụụ, gbara ọchịchịrị n'ebe ìhè anyanwụ na -adịghị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịtọghe kandụl (dịka ọmụmaatụ, ị nwekwara ike họrọ ịhapụ ha n'ime iko ma ọ bụ ite seramiiki), tinye ha na ebu wee jiri mkpịsị aka gị ma ọ bụ pensụl were jiri nwayọọ nwayọọ wepụ ikuku wee jiri nwayọ mee ya. si n'ụdị, nke a na -egbochi kandụl ahụ ịgbaji ma ọ bụ ịgbaji.
Ime kandụl n'ụlọ anaghị abụkarị nnukwu ihe egwu, mana anyị ga -echeta na anyị na -eji paraffin, nke bụ ngwaahịa na -ere ọkụ, ozugbo ọ ghọrọ mmiri mmiri, ọ ga -eru oke oke okpomọkụ. Ya mere, a na -atụ aro ka ị na -akpachara anya ndị a:
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya iyi uwe aka na enyo nchedo.
Ya adịla mgbe ị ga -ahapụ ọkụ ahụ n'enweghị nchekwa.
A na -atụ aro ka ị jiri temometa kichin iji chọpụta na anyị akarịghị oke ọkụ na -ere ọkụ n'oge ọ bụla.
Ọ -bụru l'o nweru ọku ọku, kpuchie ya na akwa ma gbanyụọ gas. Etinyela mmiri n'ọnọdụ ọ bụla, n'ihi na nke a ga -agba ume ọkụ ọkụ.
N'ikpeazụ, rapara na arịa ị na -eji eme kandụl. N'ọnọdụ ọ bụla ị gwakọtara ha nri ka ha sie.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ka esi eme kandụl nzọ ụkwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Nzughari » Otu esi eme kandụl